China PV Solar MC4 Tool Set Kit Crimping Tool Stripping Plier အပါအ ၀ င် MC4 Multifunction အတွက် Bag အိတ်များထည့်သည့်အိတ် | ထင်း
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး PV Cable ကို
1000V လူပျို Core နေရောင်ခြည် Cable ကို
1000V နှစ်ချက် Core နေရောင်ခြည် Cable ကို
1500V လူပျို Core နေရောင်ခြည် Cable ကို
1500V နှစ်ချက် Core နေရောင်ခြည် Cable ကို
Earth Ground Cable ကို
BVR AC ဘက်ထရီကေဘယ်လ်
နေရောင်ခြည် Cable ကိုကလစ်
နေရောင်ခြည် Cable ကိုလည်စည်း
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး PV Connector
MC4 Connector 1000V
MC4 Connector 1500V 50A
MC4 Connector 10mm2
MC4 ဖျူး Connector
MC4 M12 Panel Connector
MC4 Diode Connector
2 မှ 1 T ကဌာနခွဲ Connector
3 မှ 1 T ကဌာနခွဲ Connector
4 မှ 1 T ကဌာနခွဲ Connector
5 မှ 1 T ကဌာနခွဲ Connector
6 မှ 1 T ကဌာနခွဲ Connector
PV Cable ကိုကြိုး
2 မှ 1 Y ကိုဘဏ်ခွဲ Connector
3 မှ 1 Y ကဘဏ်ခွဲ Connector
4 မှ 1 Y ကဘဏ်ခွဲ Connector
ကမ္ဘာမြေ Cable ကို Grounding
Anderson ကပါဝါ Cable ကို
ဘက်ထရီ Cable ကို SAE
DC ဖျူး Holder
DC က Arrester SPD မြင့်တက်
DC က MCCB
DC ကအထီးကျန် switch ကို
AC Circuit Breaker MCB
AC Arrester SPD မြင့်တက်
AC အ RCCB RCB ELCB RCD
ဖြန့်ဖြူး Enclosure Box ကို
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Charge Controller
MPPT ဆိုလာ Controller
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Micro အင်ဗာတာ
400W Micro အင်ဗာတာ
600W Micro အင်ဗာတာ
1200W Micro အင်ဗာတာ
Anderson ကပါဝါ Connector
1P Anderson Connector
2P Anderson Connector
3P Anderson Connector
Tool Kits Bag
Crimping Tool ကို
Stripping Tool ကို
PV Tab ဝါယာကြိုးဘတ်စ်ကားဘား
1000V လူပျို Core Cable ကို
1000V ကို Double Core Cable ကို
1500V လူပျို Core Cable ကို
1500V ကို Double Core Cable ကို
1000V TUV PV1-F ဆိုလာပြား 4mm ထုတ်လုပ်သူ
DC 1000V TUV နှင့်အတူနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Panel Connector MC4 အတည်ပြုခဲ့သည်
အရည်အသွေးကောင်း PV ကြိုးကြိုး - 2to1 MC4 Y Con ...
Pwm Controller အတွက်ထုတ်လုပ်သူ - 30A 40A 50A 60A 1 ...
DC Cable ကို 1500V H1Z2Z2-K နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel 6mm2
Multi Contact MC4 နေရောင်ခြည်ကေဘယ်ကြိုး Connector 1500V 50A
50A 120A 175A 350A လျင်မြန်စွာချိတ်ဆက်မှု ၂ တိုင်ဝင်ရိုးစွန်းအန်ဒါဆင် ...
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ် MPPT 60HZ 600W အတွက်ဆိုလာမိုက်ကရိုဗာအင်ဗာတာ ...
30A 40A 50A 60A 12V 48V Intelligent MPPT Solar Charg ...
10A 20A 30A 12V 24V Intelligent PWM Solar Charge Con ...
1000V နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးအကာအကွယ်ပေးရေးကိရိယာ ...
Solar PV Circuit Breaker DC1000V DC550V DC800V DC MC ...
1000V DC Solar PV Fuse Holder 10x38mm ဆိုလာ PV F ...
Auto Wire Car Car Extender Connector2Pin SAE ဘက်ထရီ ...
2to1 MC4 Y Connector နေပူရှိနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Panel များကိုချိတ်ဆက်နေ ...
1000V 1500V OEM စိတ်ကြိုက် MC4 နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးကေဘယ် ...
စီးရီးအတွက် MC4 T Connector ဝါယာကြိုးဆိုလာပြား 2to1
10x38mm Solar Fuse Inline ကိုင်ဆောင်သူ 1000V MC4 ဖျူးစက် ...
PV Solar MC4 Tool Set Kit Crimping Tool Stripping Plier အပါအ ၀ င် MC4 ဘက်စုံသုံးလုပ်ဆောင်မှုအတွက်အိတ်
PV Solar MC4 Tool Set kits Bag Crimping / Stripping Plier အပါအ ၀ င် MC4 Multifunction ပြုလုပ်ရန်အတွက် Bag အိတ်များကိုနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး photovoltaic တပ်ဆင်မှုများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းတွင် crimping tool, stripping tool, cutter, MC4 spanner, straight / cross screwdriver ပါရှိသည်။ ၂.၅ မီလီမီတာမှ ၆ မီလီမီတာအထိရှိသော MC4 အဆက်အသွယ်များနှင့်ဆိုလာပြားများကိုလွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်သည်။
TK-1 ကိရိယာတန်ဆာပလာအိတ်များပါဝင်သည် -
Crimping Tool x 1pcs
· Plier Plipping & Cutting 1pcs
· MC4 Spanner 2pcs x
· MC4 Connector 1pair x
TK-2 ကိရိယာတန်ဆာပလာအိတ်များပါဝင်သည် -
· Stripping Tool x 1pcs
·ဝါယာကြိုး Cutter x 1pcs
·ဖြောင့်ဖြောင့်လှည်း x ကို 1pcs
·လက်ဝါးကပ်တိုင်ဝက်အူလှည့ x 1pcs
MC4 Crimping ကိရိယာ:
နေရောင်ခြည် Cable ကို Stripping Tool ကို
MC4 Solar Connector နှင့် Solar Cable တပ်ဆင်ခြင်း
·နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလုပ်ငန်းနှင့်ကုန်သွယ်မှုတွင် ၁၀ နှစ်အတွေ့အကြုံရှိသည်
· သင်၏အီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်မိနစ် ၃၀ ကြာပြီးနောက်ပြန်လည်ဖြေကြားရန်
· Solar MC4 Connector၊ PV Cables အတွက် ၂၅ နှစ်အာမခံချက်
ရှေ့သို့ Anderson Connector ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖုန်စုပ်ဖုံးအဖုံးများဖုံးအုပ်ထားသည့်ဖုံးများ
နောက်တစ်ခု: Solar Cable Crimper 2.5-6mm2 MC4 Connector MC4 Crimping Tool ကို
RISIN စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီ။ , LIMITED ။ 2010 ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Dongguan City ရှိကျော်ကြားသောကမ္ဘာ့စက်ရုံတွင်တည်ရှိသည်။ ၁၀ နှစ်ကျော်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများအပြီးတွင် RISIN ENERGY သည်တရုတ်၏ထိပ်တန်း၊ ကမ္ဘာကျော်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်လာသည် ဆိုလာ PV ကြိုးများ၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး PV Connector, PV ဖျူးကိုင်ဆောင်သူ၊ DC Circuit Breaker, Solar Charger Controller, Micro Grid အင်ဗာတာ၊ Anderson Power Connector၊ ရေစိုခံ Connector, PV Cable တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် photovoltaic system ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး.
ကျွန်ုပ်တို့ RINSIN ENERGY သည် Solar Cable နှင့် MC4 Solar Connector အတွက်ကျွမ်းကျင်သော OEM & ODM ပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။
သင်တောင်းဆိုသည့်အတိုင်းမတူညီသောနံပါတ်များအတွက်ကေဘယ်လ်လိပ်များ၊ ပုံးများ၊ သစ်သားထည်များ၊
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ DHL, FEDEX, UPS, TNT, ARAMAX, FOB, CIF, DDP ကဲ့သို့သောပင်လယ်ပြင် / လေယာဉ်များကဲ့သို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးကေဘယ်ကြိုးနှင့် MC4 connector ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ RISIN ENERGY သည်ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဓာတ်အားပေးစက်ရုံစီမံကိန်းများအတွက်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးထုတ်ကုန်များ (Solar Cables နှင့် MC4 Solar Connectors) ကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာအရှေ့တောင်အာရှ၊ Oceania၊ တောင်အမေရိက၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အာဖရိကနှင့်ဥရောပတို့တွင်ဖြစ်သည်။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဆိုလာပြားတွင်ဆိုလာပြား၊ ဆိုလာတပ်ဆင်နိုင်သောကွင်းခတ်၊ ဆိုလာပြား၊ MC4 နေရောင်ခြည်ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာ၊ Crimper & Spanner ဆိုလာကိရိယာများ၊ PV Combiner Box၊ PV DC ဖျူး၊ DC Circuit Breaker၊ DC SPD၊ DC MCCB၊ နေဘက်ထရီ၊ DC MCB တို့ပါ ၀ င်သည်။ စက်ပစ္စည်း၊ DC Isolator Switch၊ Solar Pure Wave Inverter၊ AC Isolator Switch၊ AC အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ AC MCCB၊ ရေစိုခံအကွက်ခုံး၊ AC MCB၊ AC SPD၊ Air Switch နှင့် Contactor စသည်တို့ဖြစ်သည်။
ဆိုလာစွမ်းအင်စနစ်၏အားသာချက်များ၊ အသုံးပြုမှုလုံခြုံမှု၊ ညစ်ညမ်းမှုကင်းမဲ့ခြင်း၊ ဆူညံသံကင်းမဲ့ခြင်း၊ အရည်အသွေးမြင့်သောစွမ်းအင်စွမ်းအင်၊ သယံဇာတဖြန့်ဖြူးခြင်းနယ်မြေအတွက်ကန့်သတ်ချက်မရှိခြင်း၊ လောင်စာများနှင့်ရေတိုဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အကန့်အသတ်ရှိသည်။ လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်လူကြိုက်များခြင်းနှင့်ရာထူးတိုး။
Q1: ကုမ္ပဏီရဲ့အဓိကထုတ်ကုန်ကဘာလဲ။ သင်ကထုတ်လုပ်သူလား၊ ကုန်သည်လား
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်များမှာ နေရောင်ခြည်များ, MC4 နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Connectors, PV ဖျူး Holder, DC Circuit breaker၊ Solar Charge Controller, Micro Grid Inverter, Anderson Power Connector နှင့်အခြားနေရောင်ခြည်သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်များ။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်တွင် ၁၀ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသောထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
အီးမေးလ်ဖြင့် sales@ risinenergy.com သို့သင်၏သတင်းစကားကိုပေးပို့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလုပ်ချိန်အတွင်းမိနစ် ၃၀ အတွင်းသင့်ထံပြန်ကြားပါမည်။
Q3: အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ကုမ္ပဏီမည်သို့လုပ်ဆောင်သနည်း။
၂။ ကျွမ်းကျင်။ ကျွမ်းကျင်သောလုပ်သားများသည်ထုတ်လုပ်မှုကိုကိုင်တွယ်ရာတွင်အသေးစိတ်ကိုဂရုစိုက်သည်။
Q4: သင် OEM စီမံကိန်းဝန်ဆောင်မှုပေးပါသလား
OEM နှင့် ODM အမှာစာများသည်နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် OEM စီမံကိန်းများတွင်အပြည့်အဝအောင်မြင်သောအတွေ့အကြုံရှိသည်။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ R&D အဖွဲ့သည်သင့်အားပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြံပြုချက်များပေးလိမ့်မည်။
သင့်အားအခမဲ့နမူနာများကိုကမ်းလှမ်းရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူပါသည်၊ သို့သော်သင်ပို့ဆောင်စရိတ်ပေးရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။သင့်တွင် Courier Account ရှိလျှင်နမူနာများကိုစုဆောင်းရန်သင်၏ Courier ကိုပို့နိုင်သည်။
၁။ နမူနာအတွက် ၁-၃ နေ့ရက်များ၊
၂။ အမှာစာငယ်များအတွက် ၃-၁၀ ရက်၊
3) အစုလိုက်အပြုံလိုက်မှာယူမှုများအတွက်: 10-18 နေ့ရက်များ။
mc4 tool ကိုအိတ်
mc4 tool ကိုပစ္စည်းများ
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Panel Connector MC4 DC 1000V TUV အက်ပလီကေးရှင်း ...
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး cable ကို 10mm2 များအတွက် MC4 နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး panel ကို Connector
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Panel Conne များအတွက် MC4 နေရောင်ခြည် Diode Connector ...
1000V 1500V OEM စိတ်ကြိုက် MC4 နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးတိုးချဲ့မှု ...
10x38mm ဆိုလာဖျူး Inline ကိုင်ဆောင်သူ 1000V MC4 ဖျူး ...
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးအင်ဗာတာ Connector MC4 M12 PV Panel ကို Plug
MC4 Connector ဖုန်သက်သေပြအဖုံးတံဆိပ်ခတ် Cap
အဆက်ဖြုတ်ခြင်း MC4 အတွက်ကိရိယာ MC4 Spanner Wrench Fit ...
အလိုအလျောက်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး PV Cable ကို Stripper Strippin ...
Solar Cable Crimper 2.5-6mm2 MC4 Connector MC4 ...
2to1 MC4 Y Connector အတွင်းရှိနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Panel များကိုဆက်သွယ်ခြင်း ...